လောင်းကစားစွဲခြင်းကသင်၏ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းသောအပြုအမူစွဲလမ်းမှုအပေါ်တွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်လောင်းကစားစွဲလေ့လာမှုများ (အောက်တွင်စာရင်း) တို့ပါဝင်သည်သလဲ? ပထမအချက်အနေဖြင့် DSM တွင် Pathological Gambling အဖြစ်ပါဝင်သောပထမဆုံးအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်က slot များကစားခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းနေမည်ဆိုပါကအင်တာနက် porn streaming များကိုစွဲလမ်းနိုင်လိမ့်မည်။ ဤအခန်းတွင်အများပြည်သူအတွက်ဆောင်းပါးနှင့်သုတေသနဆောင်းပါးများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဆောင်းပါးဆောင်းပါးများကို“ L” ဖြင့်မှတ်သားထားပါသည်။
Disorders (ရောဂါဗေဒသို့မဟုတ်ပြဿနာ) လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဝင်ရိုးတန်းငါစိတ်ရောဂါ Disorders: အရက်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် epidemiological စစ်တမ်း မှစ. ရလဒ်များ (2011)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစား (2) ကထိခိုက်နစ်နာလူနာတွေထဲကနေ Platelets အတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုစညျးတစ်ဦးက (2011A) Adenosine receptor
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (2017) ၏တစ်ဦးက biopsychological ပြန်လည်သုံးသပ်
တစ်ဦးက D2 ရန်ရောဂါဗေဒ Gambler တစ်လောင်းကစားအပိုင်း (2007) ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းနှင့် Prime အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်
လောင်းကစားအတွင်းလူနာများထဲတွင်ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်၏တစ်ဦးက longitudinal စာမေးပွဲ (2014)
ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်လောင်းကစားကဲ့သို့သောအပြုအမူအကဲဖြတ်ရန်တစ်ဦးကချဉ်းကပ်မှုအသစ်: တစ်အပြုသဘောစစ်ကူ (2014) အဖြစ် intracranial Self-stimulation သုံးပြီး
လောင်းကစားစွဲပြင်းထန်မှုနှင့်ဗဟို dopamine အဆင့်ဆင့်အကြားတစ်ဦးကအလားအလာ link ကို: အလိုအလျောက်မျက်စိမှိတ်နှုန်းထားများ (2018) မှအထောက်အထား
တစ်ဦးကြွက် slot ကစက်လုပ်ငန်းတာဝန် (2014) တွင်ဆုလာဘ်မျှော်မှန်းပြောင်းလဲပစ်အတွက် dopamine D₄ receptors များအတွက်တစ်ဦးကရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ထစ်အငေါ့အာရုံကြောလက်မှတ်ပေါင်း: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအစွန်းရောက်လောင်းကစားဝိုင်းမှ cortico-striatal hypersensitivity ဖော်ပြရန်
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (2) တွင်တစ်ဦး dopamine D2015-receptor ရန်အားဖြင့်သင်ယူခြင်းပြစ်ဒဏ်နှိုင်းယှဉ်ဆုလာဘ်၏ပုံမှန်မဟုတ်သောမော်ဂျူ
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ပြောင်းလဲ dopamine function ကို (1997)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ကိုကင်းမှီခို (2014) တွင် simulated slot က-စက် fMRI စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်များနှင့်အရှုံးအပြောင်းအလဲနဲ့၏ပြောင်းလဲအာရုံကြောဆက်စပ်
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက်ပြောင်းလဲ orbitofrontal sulcogyral ပုံစံများ: တစ်ပေါင်းစုံပါလေ့လာမှု (2019)
ရောဂါဗေဒ Gambler တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု (2011) ခုနှစ်တွင်သင်ယူခြင်း Alternative
ရောဂါဗေဒ Gambler အတွက်အနီးအလှမယ်ရလဒျမှ Amplified Striatal တုံ့ပြန်ချက် (2016)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (2003) တွင် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ဦး FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (2018) ထဲ၌မြုပ်လျက်ရှိကုန်ကျစရိတ်အောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု
ကျန်းမာကော့ကေးဆပ်ဘာသာရပ်များ (2) တွင်လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူများအတွက်အန္တရာယ်နှင့်အတူ dopamine D2010 ကဲ့သို့ receptors အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့မျိုးကွဲများ၏အစည်းအရုံး
Non-ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ, ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့် abstinent ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု: တစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှု (2016)
ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအတွက် dopamine-သွေးဆောင်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရေး attenuation (2019)
ရောဂါဗေဒ Gambler အတွက်ခံတွင်းဖက်တမင်းဆေးပြားစိန်ခေါ်မှု (2015) အပြီးတွင် Endogenous Opioid ဖြန့်ချိကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ
တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု (2010): abstinent ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ, မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ဦးနှောက် Imaging ကလေ့လာရေး (2010)
တစ်ဦး slot ကစက်ဂိမ်းကာလအတွင်းကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းလောင်းကစားသမားတွေ၏ဦးနှောက် oscillatory လှုပ်ရှားမှု (2019)
ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့အချိန်ဇယားကိုမှနာတာရှည်ထိတွေ့ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးမှ (2014) ာင်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်
အလုပ်အမှုဆောင် Functions များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်-Making ချို့ယွင်း Cluster လောင်းကစား Disorder အတွက်သိမှုလိုငွေပြမှု Sub-အမျိုးအစားများ (2017)
အေး pressor နာကျင်မှုများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ: အ opioid စနစ်သက်ရောက်မှု (2019)
ဘုံနှင့်အန္တရာယ်သဘောထားကို (2017) အပေါ်အခြေခံပြီးလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ Subtype အတွက်ဦးနှောက်မူမမှန် differential
လောင်းကစားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများ (Neurobiological and Psychological based)
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက် compulsive-related neurocognitive စွမ်းဆောင်ရည်လိုငွေပြမှု: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (2017)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (2005) တွင် Cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု
Cue-reactive ပုံရိပ် Gamble နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောမှ Cue-reactive တိုက်တွန်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဆုကြေးတုံ့ပြန်နိုင်မှု၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး Poker-စက် Gambler (2019) တွင်အကျိုးသက်ရောက် Mediates
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများထုတ်ယူခြင်းစဉ်အတွင်းရောဂါဗေဒ Gambler ၏ဆုကြေး Circuitry အတွက်အာရုံခံ Activity ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ (2010)
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (2017) တွင် State-မှီခိုအန္တရာယ်သဘောထားကိုမော်ဂျူ၏လိုငွေပြမှု
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်အထီးရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်စိတ်ကြွဆေးမှ differential နှလုံးသွေးကြောနှင့် hypothalamic pituitary တုံ့ပြန်မှု (2015)
disorders လောင်းကစားဝိုင်း: အမူအကျင့်စွဲ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောအယူအဆ (2014)
အဆိုပါ Orbitofrontal Cortex ၏ Dopamine Agonists နုတ်မ Value ကိုထိခိုက်လွယ်: ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများအတွက်တစ်ဦးကအစပျိုး? (2009)
Dopamine ဟာ Value ကို-လွတ်လပ်သောလောင်းကစား propensity (2017) အားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
Dopamine ဟာအနီး-လွဲချော် Effect များအတွက်သည်အထိအထောက်အထားတစ်ခုအပေါက်စက် Task ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းဆုကြေးကိုမျှော်လင့် modulates ။ (2011)
Dopamine အခြေခံ Sensation-ရှာစရိုက်များ (2013) ၏အမည်အဖြစ်အန္တရာယ်-ရိုက်ယူခြင်း modulates
အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုစွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်တိုးမြှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် (2011)
ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (2010) ၏ ventral striatum အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်
Dopamine, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်လောင်းကစားကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အရေးပါမှုကို (2013)
လူသားတွေအတွက် Dopamine, အချိန်နှင့် Impulse (2010)
မသေချာမရေရာမှုနှင့် dopaminergic လောင်းကစားစွဲခြင်း၏လက္ခဏာများ (2019)
တစ်ဦးကြွက်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ရှေးခယျြမှုအပြုအမူအပေါ် disulfiram ၏ဆိုးကျိုးများ: catecholamines အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ (2018)
လောင်းကစား Disorder လူနာများ (2017) တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သော Anticipatory မငြိမ်သက်မှုကြောင့်ထုတ်ယူခြင်း၏ electroencephalograph အထောက်အထား
မသေချာမရေရာအောက်မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဇီဝ arousal မရေရာဒွိဟစဉ်အတွင်းတိုးလာလောင်းကစားဝိုင်းခန့်မှန်းပေမယ့် (2016) အန္တာရာယ်မရ
Endogenous cortisol ပမာဏရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (2014) တွင် Non-ငွေကြေးဆိုင်ရာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ငွေကြေးဆိုင်ရာတစ်ခု imbalanced striatal sensitivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်
ဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုများအတွက်သင်တန်းနည်းပြအာရုံစူးစိုက်မှုကို: တစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှု (2019)
တုံ့ပြန်ချက်-related အဆိုးမြင်အတွေးတွေငွေကြေးအကျိုးအမြတ်၏ပျက်ကွက်ထင်ဟပ်: ERP လောင်းကစားဝိုင်းလေ့လာမှု (2018) မှသက်သေအထောက်အထားများ
DSM-5 (2014) တွင်သစ်ခွဲခြားရေး၏အလငျး၌ရှိရောဂါဗေဒလောင်းကစား: ရောဂါလက္ခဏာများအနေဖြင့် Neurobiology မှ
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်တိုကျရိုကျ cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ကိုပြောင်းလဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (2016) မှလွတ်လပ်စွာဖြစ်ပေါ်
မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal dysregulation: ညီရှေ့နောက်မညီ? (2013)
neuroscience နှင့် neuroimaging ထံမှလောင်းကစားစွဲအသိအမြင် (2015)
လောင်းကစားသည်အထိနှင့်လောင်းကစားစွဲ: ဆင်ခြင်မဲ့အတွက် Dopamine ၏အခန်းက္ပပွနျလညျသငျ့မွ (2013)
လောင်းကစားပြင်းထန်မှုအနီး-လွဲချော်ရလဒ်များ (2010) မှ midbrain တုံ့ပြန်မှုခန့်မှန်း
လောင်းကစားရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု (2003) ကတိုကျတှနျး
အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာအားကစားပြိုင်ပွဲ: လောင်းကစားစွဲ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာ (2015)
ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်တစ်ဦးချုပ်ကိုင်ရယူခြင်း: ဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ neuroscience နိုင်မလဲ? (2014)
လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ချိတ်ဆက်: လူသားတစ်ဦး၏ပြဿနာသို့မဟုတ်စက်ဒီဇိုင်း? (2018)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်လောင်းကစားရောဂါမှ dopamine ဘယ်လိုအလယ်ပိုင်းရှိသနည်း (2013)
ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ (2010) တွင်ဆုချမှ Hypersensitivity
အဆိုပါလောင်းကစားဦးနှောက် (2016) Imaging
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ဆုလာဘ်အမျိုးမျိုးဖို့ sensitivity ကိုအတွက်မညီမမျှ (2013)
လောင်းကစား Disorder နှင့်ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Impulse: တစ် Meta-analysis သည် (2019)
- (+) - PHNO (11) [(2014) ကို C] နှင့်အတူတစ်ဦး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Vivo သက်သေအထောက်အထားအတွက်
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှိုင်းယှဉ်ကင်းမှီခိုအတွက်တိုးမြှင့် corticolimbic ဆက်သွယ်မှုမူးယစ်ဆေးပြင်းထန်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-related Impulse (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Prefrontal Cortex နှင့်ဆုကြေးစနစ်အကြားတိုးပွားလာ Functional ဆက်သွယ်မှု (2013)
လောင်းကစားစွဲ (2017) တွင်တိုးမြှင့် Striatal Dopamine Synthesis စွမ်းဆောင်ရည်
ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းတိုးလာ ventral-striatal လှုပ်ရှားမှုပြဿနာဖဲချပ်လောင်းကစားပြင်းထန်မှု (2015) ၏အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopaminergic neurotransmission နှင့်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အကြားပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့ (2011)
ကံ, ဒီမှာလာ! အလယ်အလတ်-to-မြင့်မားသောအန္တရာယ်လောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုဆီသို့အလိုအလျောက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို (2017)
နှင့် Stop Miss-အနီးပေါက်စက် Play တွင်ခလုတ်: တစ်ခုကသူတို့ဟာကစားသမားအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုမည်သို့၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, မေလ, Foster မှားသိမြင်မှု (2017)
near-Miss မျက် Gambler ပိုအလောင်းအစားမှ
အာရုံကြောနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံနည်းကျလောင်းကစားခြင်းရောဂါအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသားများ - ထိခိုက်မှုမရှိသောမောင်နှမများ (2019) ကိုလေ့လာခြင်း
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်အာရုံကြောဆက်စပ်: fMRI လေ့လာမှုများတစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု (2017)
တားစီးနှင့်ဆုလာဘ်၏အာရုံကြောဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာ (2019) ဆက်စပ်နေကြသည်
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (2016) တွင် cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏အာရုံကြောအလွှာ
အဆိုပါâရောဂါဗေဒ Gambler အတွက်€œNear-Missâ€ Effect (2010) အတွက် Neurobehavioral အထောက်အထား
fMRI (2010) ကထင်ရှားအဖြစ်အမည်ခံလက်တွေ့ကျကျ Blackjack ဇာတ်လမ်းထဲမှာလောင်းကစားပြဿနာ Neurobiological ဆက်စပ်မှု
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (2014) တွင်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်၏ Neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံပြု
နျူကလိယကို Activation ယူပြီးဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ် (2008) ရက်နေ့တွင်ဆုလာဘ်တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု mediates accumbens
အဝလွန်ခြင်းနှင့်အလောင်းကစားဝိုင်း: neurocognitive နှင့်လက်တွေ့အသင်းအဖွဲ့များ (2015)
အပန်းဖြေလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းတုံ့ပြန်မှု၏ Opioid နှင့် dopamine ဖျန်ဖြေခြင်း (2013)
oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇ polymorphic ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအသစ်တစ်ခုကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အ Interventional သိမြင်လေ့လာမှု (2019): အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုစဉ်အတွင်း oxytocin အလယ်အလတ်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် psychostimulant စွဲ (2009) တွင် dopamine များအတွက်စင်ပြိုင်အခန်းကဏ္ဍ
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်မှီခို: ဆုလာဘ်များနှင့်အရှုံးရှောင်ရှားခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အာရုံကြောနှောင့်အယှက် (2014)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများနှင့်မော်တော် Impulse: Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2017) နဲ့တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းသည်ရှေ့တန်းမှခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ လမ်းကြောင်းပုံစံကိုဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၁၁)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ် (2005) ၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေသည်
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: တစ်အပြုအမူစွဲ (2016)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: တစ် neurobiological နှင့်လက်တွေ့ update ကို (2011)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: တစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါ (2016) အဖြစ်၎င်း၏ခွဲခြားများအတွက်သက်ဆိုင်ရာပု neurobiological သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: ထဲကဓာတုပစ်စညျး, neuroimaging နှင့် neuropsychological တွေ့ရှိချက်တစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု (2012)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: dopaminergic neurotransmission နှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံဖို့အသားအရေ conduction တုံ့ပြန်မှုစပ်လျဉ်း (2010)
Pachinko ကစားသမားအတွက်ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကို; beta-နဲ့အတူ Endorphins, catecholamines, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တ္ထုများနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း (1999)
တုံ့ပြန်ချက်-သွေးဆောင် Beta ကိုလှို Power ကဆုလာဘ်များ၏ပျက်ကွက်စဉျးစားကွညျ့: တစ်ခု EEG လောင်းကစားလေ့လာမှု (2018) မှစ. အထောက်အထား
တစ်ဦးကြွက်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်အဓိက Win-တွဲတွေကိုမတိုင်မီကထိတွေ့မှုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ sensitivity ကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine efflux ဖိနှိပ်: စွဲ၏အကျိုးကိုချို့တဲ့အယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှု (2019)
လောင်းကစားဝိုင်းစဉ်အတွင်း medial တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေပြပွဲဆုလာဘ် hypersensitivity (P300) ။ (2011)
လောင်းကစားစဉ်အတွင်း medial တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေပြပွဲဆုလာဘ် hypersensitivity (2011)
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက်လျှော့ချ cortical အထူ: တစ် morphometric MRI လေ့လာမှု (2015)
လျှော့ချရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်မှီခိုအတွက်ဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက် amygdala အတွက် differential ကိုပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်လည်ပတ် prefrontal (2017)
နှင့် Disorder (2019) လောင်းကစားခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဆုလာဘ်များနှင့်အရှုံးအလားအလာကို၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့သက်ဆိုင်သော
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (2017) တွင် Impulse နှင့်ဆက်စပ်သောအနားယူ-ပြည်နယ် EEG လှုပ်ရှားမှု
Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကလေ့လာရေးတစ်ခုတွင် Meta-analysis သည် (2014): လောင်းကစား Disorder အတွက် Pathway အလုပ်မဖြစ်ဆုချ
Huntington ရဲ့ရောဂါ (2014) တွင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူ
တစ်ဦးအကဲဖြတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းတံထွေး cortisol နှင့် alpha-amylase အဆင့်ဆင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်သားသစ် (2014) တွင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအစီအမံနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားပတျသကျ
serotonin နဲ့ Dopamine ဆုံးရှုံးမှု (2010) Recover မှလောင်းကစားအတွက်လိုက်ဖက်သောအခန်းကဏ္ဍ Play
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါလူနာများတွင်သွေးရည်ကြည် BDNF အဆင့်ဆင့်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုညွှန်းကိန်း (2016) ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်နေကြသည်
ကူးအမျှင်များ၏ဒေသများရှိထင်ရှားအပြုအမူများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း၏ shared microstructural features တွေ (2017)
တူညီခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsive အပေါ်တစ်ဦးအာရုံ (2012)
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ မကာအိုရှိဖိလစ်ပိုင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအမျိုးသမီးများအကြားလောင်းကစားခြင်းနှင့်မသန်မစွမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်သော Spatial နှင့် sociodemographic ဆက်စပ်မှုများ (2019)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် binding Striatal dopamine D₂ / D₃အဲဒီ receptor စိတ်ဓါတ်များ-related Impulse (2012) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိအထောက်အထားများနှင့်အနာဂတ်ပတ်သ က်. (2014): ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဆက်ဆံဖို့ Glutamatergic System ကိုပစ်မှတ်ထား
တစ်အွန်လိုင်းပေါက်-စက်ခြင်း simulation (2017) ကိုသုံးပြီးပြဿနာအပေါက်-စက်လောင်းကစားနားလည်ခြင်းတစ်ခုယ့-sensitive ချဉ်းကပ်စမ်းသပ်
အဆိုပါ agranular နှင့် granular insula differential တစ်ဦးကြွက် slot ကစက်လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အပြုအမူများကဲ့သို့လောင်းကစားအထောက်အကူပြု: ဆုလာဘ်မျှော်မှန်း (4) အပေါ်တစ်ဦး dopamine D2016 agonist ၏ inactivation နှင့်ဒေသခံပြုတ်ရည်၏ဆိုးကျိုးများ
ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်တုန့်ပြန်မှုသည်အမှန်တကယ်ဆုမပေးဘဲတောင်မှဖြစ်ပေါ်သည်! (၂၀၁၇)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် D2 /3dopamine အဲဒီ receptor: [11C] နှင့်အတူတစ်ဦး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု - (+) - propyl-hexahydro-naphtho-oxazin နှင့် [11C] raclopride (2013)
အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုများနှင့်လောင်းကစား Disorder အတွက် Dopamine ၏သုံးမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ် (2013)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (2015) တွင်ထကြွလွယ်သောအထူးလျှော့စျေး၏အာရုံကြောအခြေခံ
ရိုနှင့်လောင်းကစားရောဂါအတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း၏ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံပြု (2017)
လောင်းကစားအပြုအမူကိုအဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသနည်း။ dopamine ၏အခန်းကဏ္ကိုလေ့လာခြင်း (၂၀၁၃)
လက်ဝဲ Basal ganglia နှင့်လက်ဝဲ prefrontal cortex အကြားအဖြူကိစ္စသမာဓိရှိလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (2016) တွင်အန္တရာယ်
ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (2016) တွင်အဖြူရောင်ကိစ္စကျေးရွာအုပ်စုသမာဓိရှိ
အဘယ်ကြောင့်အချို့ကအားကစားပြိုင်ပွဲအခြားသူများထက်ပိုမိုစှဲဖြစ်ကြသည်: တစ်ပေါက်စက်ဂိမ်းထဲမှာဇွဲရှိခြင်းအပေါ်အချိန်နှင့်ငွေပမာဏသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2016)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်သိမြင်မှုနှင့်အ neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ် (2010): လောင်းကစားသမားတွေအနိုင်ရရန်ပျက်ကွက်အဘယ်ကြောင့်
(L) လောင်းကစားသမားများကလိင်ထက်ငွေကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင် (2013) - Desensitization
(L) ကို၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းစွမ်းရည် (2013) ကိုထိခိုက်ကြောင်းလောင်းကစားစွဲပစ္စုပ္ပန်ဦးနှောက် function ကိုမူမမှန်
(L) လောင်းကစား (2009) ဦးနှောက်ဒိုင်းနမစ်ကိုပြောင်းလဲ
(L ကို) ကဦးနှောက်လောင်းကစားဖို့စွဲလာကဘယ်လို (2013)
(L) နီးပါးအနိုင်ရ (2016) လောင်းကစားစွဲပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖြစ်ပါသည်
(L) ကိုရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းဦးနှောက် (2014) တွင်ပြောင်းလဲ opioid စနစ်ဖြင့်ဆက်စပ်နေသည်
(L) ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များက D4 receptors (2013) ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ကြွက်များတွင်ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုလျော့ချ
(L) ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များက (2013) ကြွက်များတွင်ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုလျော့ချ
(L) UBC လေ့လာမှု (2016) ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေသို့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မီးလုံးများနှင့်ဂီတအလှည့်ကြွက်များကိုပြသ